Kuthetha ukuthini ukuBambisana kunye?
Kwiindawo zokomoya, mhlawumbi abantu bathetha ngokubandakanyeka kwiiprojekthi zendalo kunye kunye nokudala amaphupha abo . Kodwa, yintoni na eli gama lithetha ntoni?
Ingqiqo elula. Ukubambisana ngokubambisana kwenzeka ngokusemgangathweni xa umphefumlo wakho okanye ukwazi kwakho kwangaphakathi kukukhuthaza ukuba uthathe isenzo kwaye ulandele ukuthanda kwakho okanye uphumelele injongo yakho yobomi. Nangona kunjalo, akusoloko kulula ukuphulaphula ezo zilwanyana ezizolileyo ngaphakathi kwethu.
Okanye, siba novila kwaye sikhetha ukuvumela umoya wexesha elizayo ukuba aphume ngaphandle kokuzama ukuphakamisa umnwe.
Akukho Gumbi loLuntu oluPhuhliweyo
Ehlabathini lokudalwa ngokubambisana, akukho nxaxheba kwixhoba. Ngaba unomkhuba wokuzixolisa, okanye uhlala ubeka omnye umntu icala xa izinto zingahambi? Ukuba impendulo nguwewe, uza kuba nexesha elinzima ukusebenzisana kunye nomncedisi wakho wolondolozo . Thina siba ngamaxhoba esibi xa sivumela ukuba sihlale size sijonge kuyo. Ukukhuthazwa kunye nenjongo yokwamkelwa yizinto eziphambili ekudaleni ngokubambisana ubomi obuhle.
Awunayo Imfuneko Yokuhamba Yodwa
Ukubambisana ngokubambisana kukungena kumdlalo kwaye wenze inxaxheba yakho ukubonisa iminqweno yakho , ukuhlangabezana neenjongo zakho, okanye ukucwangcisa ikusasa lakho. Ngokuqinisekileyo, unako ukuzama ukudala into ngaphandle kokomoya wakho, nokuba ubiza uThixo, umdali, u-Universe, okanye enye into, kodwa iya kuba luhambo olude kwaye lulukhuni.
Akusiyo into enomdla ukuba ube ngumlingane ongenalucalulo kulo mbini olwalamano. Awukwazi ukuhlala phantsi kwaye ulindele amathuba okuhanjiswa kuwe kwisitya sesilivere. Awukwazi ukunqoba iLotter ukuba awuthengi ithikithi. Uncedo lukhoyo.
Kukho impembelelo ye-cosmic eya kuvuyela iminyango ngokuvuyela kwaye ibonise indlela ozoyenza ngayo xa uzimisele ukuwamkela isandla.
Umlingani Phezulu kwaye Wenze Uqhagamshelwano Oluthile
Xa ubiza iingelosi ukuba uncedise okanye ubuze umntu wakho ophezulu ukuba akhokele ukhokhe ungayi kuhlala kwaye ulinde imikhosi engabonakaliyo ukwenza konke ukuphakamisa okunzima kuwe. Yilungele ukuthatha inyathelo uze ufake enye yamandla akho ukuba ufumane nantoni na oyifunayo. Ngumsebenzi wakho ukuqhubela phambili kwaye wenze uphawu lwakho. Ngamnye wethu ukhululekile ukuhamba ngesantya sethu. Yenza oko kukhululekile: uthathe amanyathelo omntwana, ukunyuka okukhulu, okanye into ephakathi. Yaye xa uziva unesidingo sokuthatha ikhefu ngokuphindaphindiweyo ukuphonononga kwakhona icebo lakho lezemidlalo, ngokuqinisekileyo yenza loo nto.
Unako ngokupheleleyo ukufumana izigqibo kwiingxaki kwaye ufumanisa ukuba i-niche epheleleyo yenzelwe wena. Ukubambisana ngokubambisana kuthetha ukuvuma ukuba unembopheleleko yobomi bakho kwaye uqhubeka uthatha amanyathelo okufumana impumelelo, ulonwabo kunye nokuphila kakuhle.
Iiprojekthi zeCraft Craft Projects
Iimbangela ezintathu ze-Clutter yengqondo
Isikhokelo sokuqulunqa ukuqinisekiswa kwenyanga
Ukuseka Ubuxhamli Bamakhasimende / Abaphili
Uxinzelelo lweNgxaki yokuPhathwa kwengxaki
Uluhlu lwezandla Iingcamango zabahlobo abatsha kunye nosapho
UkuTyekiswa kokuTyekiswa koBoniso
Ukuqokelela Iimpawu zeTattoo zokuPhilisa
Iingcamango ezivela kuMthetho woLuntu owaziwa ngokuba nguMthetho woKhenketho
Yiyiphi i-Bikram Yoga eyandifundayo kwiminyaka yobudala engama-50
Iphepha le-Watercolor: Okufuneka Ukwazi
Uludwe lwe-Roman Ludi Scaenici
Intsingiselo yegama lesiFrentshi elithi 'Rester Bouche Bée'
Kutheni iCap Power Power Nap isebenza
Ukufunda nokubhala Iimpapasho zeeNdaba ze-ESL Isifundo
Tom Morello Ubomi kunye neProfayili
Iibhola ezilahlekileyo kwiGalofu
Isithethi (ulwimi kunye noncwadi)
Iincwadi malunga no-Albert Einstein kunye nobudlelwane
Izindlovu zeNdlovu: Iifoto kunye neeprofayili
101 kwiMidlalo yaseOlimpiki yamandulo
Iimvo eziDumile ezivela kuBobby Jones kunye Nathi
Yintoni iFat ngoLwesibili?
UkuHlulwa koMbane Inkcazo
I-Venus Aquarius Woman
Iintshonalanga - Iifom zeTornadoes Ifomu
Imfazwe yecala likaSaddam Hussein
Eyona ndlela ifanelekileyo uStephen Colbert Quotes
Iimviwo zeYunivesithi yaseMiami
Imfazwe Yehlabathi II: Ngokubanzi uBenjamin Benjamin O. Davis, Jr.
Ngubani uNorse uThixo uOdin?
Ukufumanisa Ukuba iNgeniso yeNgxowa-mboleko phantsi kweNgeniso yeNgeniso
Ngubani owenziwe iMithetho yeMotionary Motion? Johannes Kepler!